Mmadu choro ihe isi ike na ndu nihi na odi nkpa inwe ihe ịga nke oma. - APJ Abdul Kalam - Kwuru Pedia
Anyị, ụmụ mmadụ nwere ebumnuche ịbụ nke a na-eburu ọ joyụ. Ọ bụrụ na ọ joyụ ahụ adịgide ogologo oge, anyi chere na obu uzo ndu. Atụmanya anyị na-abawanye ma anyị chere na ọ bụ ihe ọhụrụ. Anyị na-ewere ihe dị iche iche ma ghara iji ya kpọrọ ihe karịa ka anyị siri enweta mgbe anyị enweghị ya.
Ma anyị ekwesịghị ịrụ ọrụ otu a. Anyị kwesịrị ịmara ihe anyị nwere ma nwee ekele maka ya. Ihe ọ bụla anyị nwere gabigara ókè, anyị kwesịrị inye ya ndị ọzọ nwere ike ịchọrọ ya. Nke a ga - enyere ọha mmadụ aka ito ma nwee ọganihu na - enweghị nnukwu esemokwu n'etiti ndị na - ebi ezigbo ndụ ha na ndị na - adịghị enwe isi.
Mgbe nsogbu siri ike dakwasịrị anyị, ọ na-adị anyị ka anyị nwere nkụda mmụọ ma chọpụta mgbe anyị bara uru dị mma ndị anyị nwere. Anyị amaghị mgbe ọdachi dakwasịrị. Yabụ, anyị kwesịrị inwe ekele maka oge ọma ọ bụla anyị nwere.
Mgbe nsogbu chere anyị, anyị ghọtara etu ihe anyị nwere ike were were. Mgbe oge siri ike gafere ma anyị hụ ọzọ oge ọzọ, mgbe ahụ anyị ga-enwe ọ enjoyụ karịa. Ọ bụ n’ihi na anyị ma etu ihe si tufuo ya ma ọ bụ lee ihe ùgwù anyị nwere n’ezie na anyị nwere ike nweta ihe ịga nke ọma anyị na-ahụ taa.
N'oge ihe isi ike, anyị enweghị olileanya mana mgbe anyị siri na ya pụta, anyị ghọtara uru ihe anyị nọ na-atụ anya ya kemgbe, ọfụma. Ya mere, ma ihe siri ike, ma oge obi ụtọ, na-enyere anyị aka ịkpụzi ụdị mmadụ anyị ga-emecha.
Ihe isi ike na ndu na aputa ihe onyonyo
Ndụ adịghị ike na-ekwu okwu
Ezi okwu na-ekwu Banyere Ihe ịma aka Ndụ
Kwuru okwu na ndu isi ike
Anyị ekwesịghị ịda mbà ma ọ bụ kwe ka nsogbu ahụ merie anyị. - APJ Abdul Kalam
Vinghapụ ihe abụghị atụmatụ akparamaagwa nke mmadụ. Agbanyeghị, ọnọdụ ụfọdụ rute ebe anyị nwere mmetụta inye…
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịcha dịka anyanwụ, buru ụzọ gbaa dịka anwụ. - APJ Abdul Kalam
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịcha dịka anyanwụ, buru ụzọ gbaa dịka anwụ. - APJ Abdul…